एमसीसी सम्झौता चाँडो अनुमोदन गरौँ ढिलो गर्दा अन्तै जाला : डा. बाबुराम भट्टराई - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
एमसीसी सम्झौता चाँडो अनुमोदन गरौँ ढिलो गर्दा अन्तै जाला : डा. बाबुराम भट्टराई
काठमाडौं, २८ भदाै ।
देशभर अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) विरोध भइरहँदा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन चाँडो गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
एमसीसी पारित गर्नु पक्षमा रहेका उनले सोमबार गृहजिल्ला गोरखामा पत्रकारसँग कुरा गर्दै एमसीसी देशको हितमा रहेको राष्ट्रिय सहमति गरेर छिटो अनुमोदन गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘राजनीतिक दलहरुले छिटो भन्दा छिटो सहमति गरेर यो सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नु नै राष्ट्रिय हितमा हुन्छ । जसपाले एक्लै निर्णय गर्न ससक्दैन यसमा सबैको साथ चाहिन्छ ।
त्यसैले राष्ट्रिय सहमतिबाटै टुंगो लाग्न जरुरी छ ।’ अहिले एमसीसीको विषय जनस्तर बाँडिएको र चाँडै एमसीसीको टुंगो लगाउनुपर्ने बताएका छन् ।
एमालेले संसद्‍मा प्रयोग गरेका शब्दले सभ्यताको सीमा नाघ्योः माधब नेपाल
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गर्ने क्रममा लगाएका नारामा प्रयोग भएका शब्दप्रति नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आपत्ति जनाएका छन् ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमबार आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा नेपालले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संसद् नै नचाहेको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षले प्रयोग गरेका शब्दहरूले उहाँहरूले सभ्यताका सीमा नाघेको देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता अरुको मानमर्दन गर्न बाहेक उहाँसँग लोकतान्त्रिक चरित्र र संस्कार छैन । यस्तो प्रतिपक्ष हुनु हाम्रा लागि दुः खद हो, बैठकमा नेता नेपालले भनेको कुरा एक सांसदले उल्लेख गरे ।
ओली नेतृत्वको प्रतिपक्ष जिम्मेवार भएर प्रस्तुत नभएको नेपालको भनाइ थियो । प्रतिपक्षी दलका नेताले संसद् र सभामुखप्रति पूर्वाग्रह राखेको पनि उनले बताएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले आफूहरूलाई ह्वीप नलाग्ने भनिसकेको उल्लेख गर्दै नेपालले थपेका थिए, संसद् पनि रोकिनु हुँदैन र सभामुखले संवादको कोसिस पनि जारी राख्नुपर्छ । आफ्नो कामबाट प्रतिनिधिसभा पछि हट्न सक्दैन ।